February 2018 – Page2– Thadin Media
February 27, 2018 aCrime
[Zawgyi] ၂၆.၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၀၈း၄၀ နာရီအချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင် လမ်းမပေါ်တွင် အငှားယာဉ်တစ်စီးဖြင့် ခါးပိုက်နှိုက်များ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းပေးချက်အရ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သက်သေများနှင့် အတူ အဆိုပါနေရာသို့သွားရောက်၍ ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် 5H-1590 Probox ယာဉ်ပေါ်၌ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ကျော်လွင်၊ (၂၉)နှစ်၊ အောင်မျိုးသူ၊ (၂၁)နှစ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ ဟိန်းလတ်ကျော်၊ (၃၈)နှစ်၊ ဒဂုံမြို့ သစ်(အရှေ့)မြို့နယ်နေ အောင်မင်းထွန်း(ခ)အောင်ချမ်း(ခ)ကိုချမ်း၊ (၄၉)နှစ်နှင့် ဇင်ဘိုဝင်း၊ (၂၆)နှစ်တို့ (၅)ဦးကို…
MNDAA အလင်းဝ င်ေ ရာက် မှု ၁၄၇ ဦး
February 26, 2018 aPloitical
[Zawgyi] MNDAAအလင်းဝင်ရောက်မှု ၁၄၇ဦးမုံးကိုးဂွင်လုပ်ရှားနေသောရင်း၅၁၁လို့သိရပါတယ်mndaaညီအစ်ကိုတော်တိုဥပဒေဘောင်အတွင်းဝင်ရောက်တောမည်ဟုသိရပါသည် ကိုးကန့်နယ်တကယ်တောဖွံဖြိုးမူအရှိန်အဟုန်ကောင်းနေသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည် လောက်ကိုင်နဲချင်းရွေဟော်ရန်လုံကြိုင်းဂိတ်တိုသည်မြန်မာပြည်တွင်နာမည်ကြီးဒေသဖြစ်သလို့လောက်ကိုင်သည်မြန်မာပြည်၏ဟောင်ကောင်ဖြစ်ကာအလွန်လှပသည်ဒေသလည်းဖြစ်ပါသည် ကိုးကန့်သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ကာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားကသာအုပ်ချုပ်သလိုကိုးကန်သိးသန်ရဲ ကိုးကန်နယ်ခြားစောင့်တပ်လုံထန်ကိုးကန်ပြည်သူစစ်တိုလည်းရှိကာဒေသတည်ငြိမ်နေသော်လည်းပဒေသရာဇ်အာဏာယစ်မူးနေသည်သက်ကြားအိုဖုန်အုပ်စုပြောင့်ကိုးကန့်တည်ငြိမ်မူပျက်စီးခဲပါသည် တပ်မတော်သည်အသက်သွေးခြွေးရင်းနှီးကာကိုးကန့်နယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းခဲရသည် ယခုအခါတပ်မတော်မှနယ်မြေအတော်များများကိုထိန်းချုပိထားမူ ကိုးကန့်နယ်ခြားစောာင့်တပ်များရဲများပြည်သူစစ်တို၏စည်းရုံးမူတိုကြောင့်mndaaညီအစ်ကိုတော်တိုရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလုံးသည်ပြည်လည်ပေါင်းစည်းရန်ဝင်ရောက်လာမူအားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုလိုက်သည် ယခုဝင်ရောပ်မည်အဖွဲအားနိုင်ငံတော်နဲတပ်မတော်မှလစာရိက္ခာပေးမည်ဟုသိရပ့သည် တခြားသောညိအစ်ကိုတော်တိုကိုလည်းပြည်သူတိုနဲပြန်လည်ပေါင်းစည်းအလင်းဝင်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါပါသည်. [Unicode] MNDAAအလငျးဝငျရောကျမှု ၁၄၇ဦးမုံးကိုးဂှငျလုပျရှားနသေောရငျး၅၁၁လို့သိရပါတယျmndaaညီအဈကိုတျောတိုဥပဒဘေောငျအတှငျးဝငျရောကျတောမညျဟုသိရပါသညျ ကိုးကနျ့နယျတကယျတောဖှံဖွိုးမူအရှိနျအဟုနျကောငျးနသေောဒသေတဈခုဖွဈသညျ လောကျကိုငျနဲခငျြးရှဟေျောရနျလုံကွိုငျးဂိတျတိုသညျမွနျမာပွညျတှငျနာမညျကွီးဒသေဖွဈသလို့လောကျကိုငျသညျမွနျမာပွညျ၏ဟောငျကောငျဖွဈကာအလှနျလှပသညျဒသေလညျးဖွဈပါသညျ ကိုးကနျ့သညျကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေဖွဈကာအုပျခြုပျရေးပိုငျးကိုကိုးကနျ့တိုငျးရငျးသားကသာအုပျခြုပျသလိုကိုးကနျသိးသနျရဲ ကိုးကနျနယျခွားစောငျ့တပျလုံထနျကိုးကနျပွညျသူစဈတိုလညျးရှိကာဒသေတညျငွိမျနသေျောလညျးပဒသေရာဇျအာဏာယဈမူးနသေညျသကျကွားအိုဖုနျအုပျစုပွောငျ့ကိုးကနျ့တညျငွိမျမူပကျြစီးခဲပါသညျ တပျမတျောသညျအသကျသှေးခွှေးရငျးနှီးကာကိုးကနျ့နယျကိုတညျငွိမျအောငျထိနျးသိမျးခဲရသညျ ယခုအခါတပျမတျောမှနယျမွအေတျောမြားမြားကိုထိနျးခြုပိထားမူ ကိုးကနျ့နယျခွားစောာငျ့တပျမြားရဲမြားပွညျသူစဈတို၏စညျးရုံးမူတိုကွောငျ့mndaaညီအဈကိုတျောတိုရဲ့တပျမဟာတဈခုလုံးသညျပွညျလညျပေါငျးစညျးရနျဝငျရောကျလာမူအားလှိုကျလှဲစှာကွိုဆိုလိုကျသညျ ယခုဝငျရောပျမညျအဖှဲအားနိုငျငံတျောနဲတပျမတျောမှလစာရိက်ခာပေးမညျဟုသိရပ့သညျ တခွားသောညိအဈကိုတျောတိုကိုလညျးပွညျသူတိုနဲပွနျလညျပေါငျးစညျးအလငျးဝငျရောကျရနျဖိတျခေါပါသညျ.
ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်း ကို ကောက်ရသူက ကတ်လဲသုံးနေရင်တောင် ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
February 26, 2018 aKnowledge
[Zawgyi] ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်း ကို ကောက်ရသူက ကတ်လဲသုံးနေရင်တောင် ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီလူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်း ပျောက်ဆုံးခဲ့လျှင် ပြန်ရှာဖို့ ခက်ခဲ မှာပါ ကောက်ရသူကလဲ ဆင်းကဒ် က အသုံးမဝင်ပေမဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ ဟန်းဆက်ကိုတော့ ပြန်မပေးပဲ ဆင်းကဒ် လဲပြီး အသုံးပြုတတ် ပါတယ်..။ အဲဒီလို အသုံးပြုနေခဲ့လျှင် လူကြီးမင်း ၏ ဖုန်း ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေလဲ ဆိုတာ သိအောင် ဖုန်း မပျောက်ဆုံးမှီ အောက်ပါ အစီအစဉ် အတိုင်း ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ထားလိုက်ပါ။သင်ကြိုပြီး…
မြန်မာ့ သတ္တိ ကို ကမ္ဘာက သိစေ ခဲ့ သည့် အို-၇ တောင်ကုန်း တိုက်ပွဲ
[Zawgyi] မန်မာ့သတ္တိကို ကမ္ဘာက သိစေခဲ့သည့် အို-၇ တောင်ကုန်းတိုက်ပွဲ(“Cobra Gold Exercise မှ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဆိုတဲ့ Post ကို ဘာကြောင့် တင်ပေးသလဲဆိုတာ သဘောပေါက်)တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရသောအကြောင်းအရင်းအမှတ်(၃၅၉)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ဌေးဦးစီး အင်အား(၁၀)ဦးနေရာယူထားသော(အို-၇)တောင်ကုန်းအား ယိုးဒယား တပ်မှတပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန့်မှ နေရာယူတပ်စွဲရန်လာရောက်စဉ်မိမိတပ်မှ မြန်မာ့ပိုင်နက်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆို မောင်းထုတ်ရာမှ ပြန်မဆုတ်ပဲစခန်းကုန်းရှေ့ ကိုက်(၂၀၀)ခန့်တွင်တပ်စွဲထားပြီး (၇-၁၂၀၀၁)ရက်နေ့တွင်ယိုးဒယားတပ်မှ ဗိုလ်ကြီး ယိုးထင်ဦးစီးအင်အား(၄၀) ယောက်မှေ၇ာက်ရှိပီး ကုန်းမှဖယ်ပေးရန်ပြောကြားမှုကြောင့် ခမရ(၃၅၉) တပ်ခွဲ(၂) တပ်စု(၄)အားဖြည့်တင်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယိုးဒယား တပ်မတော်မှ ခြေလျင် စစ်သည်(၁၀၀)…
အောင်လ ONE CHAMPIONSHIP မှာ ထိုးကြေး ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ရလဲ
February 26, 2018 aInternational News
[Zawgyi] ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် one championship က ဖိုက်တာတွေ ကို ထိုးကြေး ဘယ်လောက် ပေးလဲ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး ။ လျို့ ဝှက်ထား ပါတယ် ။ သွားလည်း မမေးပါနဲ့။ လေကုန် ပါတယ် ။ ဘယ်တော့မှ လည်း မဖြေပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အောင်လ ဘယ်လောက် ရလဲ အတိကျ မသိပါဘူး ။ သဲလွန်စ အချို့One…
မဖြစ်မနေမြန်မာပြည်ကပြည်သူေ တွ ပါ စစ်ပညာ တတ်ကျွမ်း ဖို့လိုအပ်ေ နပြီ
[Zawgyi] မဖြစ်မနေမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေပါ စစ်ပညာတတ်ကျွမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီ လိုအပ်လာရင်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ဖို အချိန်တန်ပြီလို့တော့ထင်တယ် လက်ရှိပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပြည်ပကခြိမ်းခြောက်မှုတွေ UNကခြိမ်းခြောက်လိုက် ဗြိတိန်ကခြိမ်းခြောက်လိုက်နဲ့ မြန်မာကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုပြည်သူများအချိန်မရွေးလက်နတ်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာတွေရှိတယ် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ တပ်မတော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့လက်ရှိအစိုးရလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့က ပြ ဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းတွေဖြစ်နေတယ် ပြည်သူတိုင်းစစ်ပညာသာတတ်မြောက်ထားရင် တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်မဲ့တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲက ပြည်သူတွေအများကြီးပါမကြာခင်အချိန်တော့အကောင်ထည် ဖော်နိုင်တော့မယ်လို့တော့ထင်တယ် အကန့်သတ်လေးတခုပေါ့ အမြဲတမ်းတပ်မတော် မျိုးချစ်တပ်မတော် အပျော်တန်းတပ်မတော် အဲ့လိုလေးတွေကိုစနစ်တကျခွဲပြားထားတာတွေလည်းရှိပါတယ် အပျော်တန်းတပ်မတော်ဆိုတာကကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူး ဒါပေမဲ့ လက်ရှိUTC တက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို အပျော်တမ်းတပ်မတော်လို့ခေါ်လို့ရတယ် စစ်ထဲဝင်ခြင်တဲ့ သူတွေကတော့အများကြီးပြန်ထွက်မရမှာကိုပဲစိတ်ပူကြတာ လက်ရှိစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ထွက်ပေါ်လာရင်တော့ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်စနစ်တစ်ခုတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသာပြောနေတာ လက်ရှိဒီမိုကရေစီနဲ့တူတဲ့လမ်းစဉ်မရောက်နိုင်သေးဘူး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေရှိတယ် လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်အခုကဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ တန်းဖမ်းတာပဲ ပါးစပ်ကသာဒီမိုကရေစီအော်နေတာ လွတ်တော်ထဲမှာလွတ်တော်အမတ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရ…
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား စွမ်းအင် ပိုင်ဆိုင်မှုက အမေရိကန် နိုင်ငံ အား ကျော်လွန်တော့မည်
[Zawgyi] နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်ရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Fatih Birol က လန်ဒန် မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး တစ်ခု၌ တရုတ် နိုင်ငံ ၏ နျူကလီးယား စွမ်းအင် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည် နှင့်အမျှ အနာဂတ် တွင် တရုတ် နိုင်ငံ သည် အမေရိကန် နိုင်ငံ ကို ကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာ့ နျူကလီးယား စွမ်းအင် အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ အမေရိကန်…
February 26, 2018 February 26, 2018 aInternational News
[Zawgyi] အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား ရေကြောင်းပိတ်ဆို့ မှု နှင့် အခြားအရေးယူမှုအသစ်များ ချမှတ်သွားမည့်အကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ခြင်း အပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံအား “ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့် တန်ပြန်တုံ့ ပြန်မှု” ပြုလုပ်သွားမည်ဟု မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင် ပြုံချန်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ “ ပြုံချန်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲလုပ်နေပါပြီ။…
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာကြောင့် ဦးနေ၀င်းကို ပါးရိုက်ဆုံးမခဲ့တာလဲဆိုရင်
[Zawgyi] ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်နေဝင်းက သမ္မတမန်းဝင်းမောင်ကို ကော်လာကဆောင့်ဆွဲတယ် ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဦးကျော်ငြိမ်းကို ခင်ဗျားတို့ စောက်အစိုးရကို ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်ကအငြိမ်းစားတယောက် ဘယ်သူမှမကြားဘူးတဲ့ သမိုင်းသစ်တွေ ပြောနေတယ်ကြားတယ်ဗျ။ အဲတော့ ကျနော် ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာလေးတွေ နားထောင်ဖူးတာတွေ ပြန်မျှပါရစေဗျာ။ ဂျပန်ကို ရဲဘော်သုံးကျိတ်ဘဝနဲ့ မသွားခင် စာတိုက်စာရေး ကိုရှုမောင် ဘဝကတည်းက မိန်းမမှုပွေတာ လောင်းကစားလုပ်တာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ တချို့က ပိုက်ဆံအမြဲပြတ်နေလို့ ပုလိပ်သတင်းပေးလည်း လုပ်ဖူးတယ်ဆိုစမှတ်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး နှစ်ဂိုဏ်းကွဲစဉ် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအုပ်စုမဟုတ်တဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ သိကြတဲ့ ဗစိန် ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းမှာ နေရာတခုရအောင်ယူပါတယ်။…
Boko Haram စစ်သွေးကြွ ဝင်တိုက်ပြီးချိန်တွင် မိန်းကလေးငယ် ၁၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ
[Zawgyi] Boko Haram စစ်သွေးကြွ ဝင်တိုက်ပြီးချိန်တွင် မိန်းကလေးငယ် ၁၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ ဘိုကို ဟာရမ် စစ်သွေးကြွတွေ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း မိန်းကလေးငယ် ၁၁၀ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း နိုင်ဂျီးရီးယား အစိုးရက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အတည်ပြုပါတယ်။ ဘိုကို ဟာရမ် စစ်သွေးကြွလို့ သံသယရှိသူတွေ တနင်္လာနေ့က Yobe ပြည်နယ် Dapchi က အစိုးရပိုင် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကောလိပ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးကတည်းက ဒီမိန်းကလေးငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးငယ်တွေ ဘယ်မှာ ရှိမှန်း…